'छिमेकी मुलुकको हस्तक्षेप भन्नु दलहरुले आफ्नो कमजोरी लुकाउनु मात्र हो, आफु ठिक भए सबै ठिक हुन्छ' - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
‘छिमेकी मुलुकको हस्तक्षेप भन्नु दलहरुले आफ्नो कमजोरी लुकाउनु मात्र हो, आफु ठिक भए सबै ठिक हुन्छ’
Posted by Headline Nepal | ३१ आश्विन २०७४, मंगलवार १९:४३ |
– राजनीतिक विश्लेषक डा. लोकराज बराल/
अहिले राजनैतिक दलहरुको गठबन्धन बन्नु सामान्य नै हो । भोली मिलिजुली सरकार बन्ने सम्भावना धेरै छ । त्यसैकारण यो गठबन्धन स्वभाविक नै हो । चुनावी माहोलमा गठबन्धन स्वभाविक हो । तर यो गठबन्धनले मुलुकमा विकास हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । राजनैतीक अस्थिरता अहिले जस्तो छ, भोली पनि त्यस्तै नै हुन्छ । विकासका निम्ति कम्तिमा ५ वर्षसम्म एउटैको सरकार हुनुपर्यो, एउटा राजनैतिक चिन्तन हुनुपर्यो । कर्मचारी सरुवामा मात्र ध्यान व्यापक मात्रामा जाने सम्भावना छ । त्यसकारण मलाई लाग्छ यो गठबन्धन बन्दैमा मुलुकमा विकास हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।
राजनैतिक गठबन्धन बन्नुमा मलाई लाग्छ बाहिरी शक्तिको हात छैन । यो सबै हावादारी कुरा हुन् । यो हाम्रै हातको कुरा हो । हामी केही गर्दैनौं अनि हरेक कुरा विदेशीलाई भन्छौं । नेपालमा एउटा पनि कम्युनिष्ट छैन । सातसाल देखि नै कम्युनिष्ट पार्टी छैन किनकी सबैले बहुदलिय व्यवस्था मानेरै सबैले चुनाव मानेका हुन् । नारा र व्यानरमा कम्युनिष्ट छ तर व्यवहारमा कम्युनिष्ट छैन । यी सबै अहिले टिक्नका लागि मात्रै हो । आफ्नो गल्ती ढाकछोपका निम्ति मात्रै विदेशीको हात रहेको देखाईदिएको हो ।
निर्वाचनमा वैदेशिक प्रभाव रहने सम्भावना छ छैन भन्ने अवस्था छैन । पार्टी एकता, जुटाउने, फुटाउने जस्ताकुराहरु हुन सक्छ । निर्वाचनमा आर्थिक सहयोग हुनसक्छ । प्रभाव सुक्ष्मरुपले हुनेकुराहरु हुन् । खुला सिमानाकै कारण पनि यहाँ प्रभाव पर्दैन भन्न मिल्ने अवस्था छैन ।
म निराशावादी हैन, व्यवहारिक कुरा हो । यत्रो केन्द्रिकृत राज्यबाट एकैपटक संघीयतामा उफ्रेर हाम्फल्ने बानी हाम्रो छ । विस्तारैविस्तारै गर्ने बानी छैन । विकासक्रममा जाने बानी छैन । सबै दलहरु उफ्रेर जान खोज्छन् । यसले कति सम्भव छ ? हाम्रो चिन्तन, हाम्रो गराई हाम्रो प्रशाषन सबै केन्द्रिकृत छ, हाम्रो नेताहरुको मान्यता सबै आफैं गरुम् भन्ने छ । आफ्नै पार्टीभित्र त लोकतन्त्र छैन । त्यसकारण अहिले नै सबै फुमन्तर बाचा भन्न सकिने अवस्था छैन । अभ्यास हो यो, सफल हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ । हामीले विगतदेखि हेर्दै आएको कुरा हो, जस्तै पञ्चायती व्यवस्था त्यो एउटा भयङ्कर अभ्यास थियो ।
निर्दलिय व्यवस्थाले देशमा ठुलो परिवर्तन आउने कुरा भएको थियो, त्यो पनि हेरियो । विगतमा थुप्रै अभ्यासहरु भए तर सफल भएनन् । मेरो विचारमा झन्झन् जटिलता सिर्जना गर्छ ।केन्द्रबाट अह्राउने कुरामा हस्तक्षेप हुन थाल्यो भने स्थानीय तह प्रतिउत्पादक हुन पनि सक्छ । ससाना प्रदेशहरु भएको हुनाले मनमुटावहरु सिर्जनाहरु हुन सक्छ । कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरेजस्तो हुन सक्छ । हरेक कुरा सम्वेदनशील छ, क्षेत्रीय सन्तुलन कसरी गर्ने, जातीय सन्तुलन, वर्गिय सन्तुलन तथा भौगोलिक सन्तुलन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रिय नेताहरु ध्यान दिनुपर्छ र सबै सन्तुलन गरेर लैजानुपर्छ । प्रशाषन चलाउन पहिलेजस्तो सहज हुन्न अब ।
नेपालको राजनीतिमा वाह्य शक्तिको हात हुन्छ भन्ने कुरा म मान्न सक्दैन । यसको हामी नै कारक हौ । हामी नै खेलाडी हौ । हाम्रै हातको कुरा हो । आफु अस्थिर भएपछि बाहिरी शक्तिले खेल्नु स्वभाविक नै हो । सबैभन्दा ठुलो कुरा आफु बलियो भएपछि आफु दृढ भएपछि, आफ्नो योजनाहरु लागु भएपछि कसले हस्तक्षेप गर्ने ? हामी केही गर्दैनौं बाहिर मात्र देखाउने अनि हरेक कुरा विदेशीलाई भन्छौं । आफुलाई पर्दा चाहिँ विदेशीलाई ल्याउने अनि पछि चाहिं राष्ट्रवादी बनेर ठुलाठुला भाषण गरेर पाईन्छ ? गठबन्धनहरुलाई हेर्ने छिमेकी मुलुकको दृष्ट्रिकोण शशंकित हुँदैहुन्न । अलिकति आफ्नो स्वार्थमा तलमाथि हुन्छ कि भन्ने मात्र कुरा हो । जो आएपनि उनीहरुलाई खासमा केही हुँदैन । यहाँ जुनसुकै गठबन्धनको सरकार भएपनि एउटै छिमेकी मुलुकसँग साँठगाँस गर्छु भनेर सम्भव हुँदैन । हामी धेरै नै नजिक भएका हुनाले मात्र छिमेकीहरुलाई चासो हुन्छ । यहाँ अस्थिर हुन्छ कि, अन्य बाहिरी शक्तिहरु यहाँ आउँछन् कि भन्ने चासो हुनु स्वभाविक हो । यो सबै नेपालीहरुको सँस्कार नै बसीसक्यो, आफ्नो सत्ता चलाईराख्न, आफु टिकीराख्न विदेशीलाई गाली गर्ने । जनताको नजरमा विदेशीलाई दोषी बनाउने र आफु जोगिने मात्र हो । यो सबै आफु टिक्नका लागि मात्रै हो । आफ्नो गल्ती ढाकछोपका निम्ति मात्रै विदेशीको हात रहेको देखाईदिएका हुन् राजनीतिक दलहरुले ।
एउटा काम गर्दा छिमेकीलाई चित्त बुझेन भने भन्छ, आफु विरोधी भयो कि भन्ने । यहाँको भौगोलिक अवस्थाले पनि काम गर्न निकै गाह्रो छ । तर पनि हरेक कुरामा आफु संयमित भएर बोल्ने, सबै कुरा विचार गर्नुपर्ने गर्नुपर्छ नि । हामी भारतसँग हरेक कुरामा सम्बन्धित छौं त्यसकारण पनि उनीहरुको प्रभाव छैन भन्ने हुन्न तर यति नजिक भैसकेको कारणले यो त सामान्य कुरा हो । आफुले आफु कसरी बलियो बन्ने भन्ने त सोच्नुपर्यो नि । आफ्नो रणनीतिहरु बनाउदा आफु सक्षम हुनुपर्यो ।
जुनसुकै सरकार आएपनि मुलुकमा असन्तुलित परराष्ट्रनीति चलाउन सक्दैनन् । यो चलाउन पनि हुन्न । यसले मुलुकको हित पनि गर्दैन । कुनै पार्टीहरुले आफु अनुकुल पार्न सक्दैन । केही अलिकति आफ्नो शैलीअनुसार जनतालाई मख्ख पार्ने हुनसक्ला तरपनि तात्विक रुपमा सम्भव हुन्न ।
Nextयमपञ्चकको दोस्रो दिन : आज कुकुर तिहार, नरक चतुर्दशी मनाईंदै
उमेद्वारको टिकट पक्का भएपछि पाँच शिक्षकले दिए राजीनामा
१५ बैशाख २०७४, शुक्रबार १२:३७
‘सहमतीय सरकार बनाएर अगाडी बढौं’ : डा. कोईराला
१७ बैशाख २०७४, आईतवार १७:३२
दलहरूबीच बढेको ध्रुवीकरण अन्त्य गर्न निर्वाचन
६ पुष २०७३, बुधबार ०९:२२
परिणाममुखी काम तीन गुणाले बढाउन मन्त्री शाहीको निर्देशन
१० पुष २०७३, आईतवार १७:४५